Dimy Taona Lasa Izay, Noravaravain’ny Tsunami i Japan, Manao Jery Todika Ny Mpanatontosa Sarimihetsika Iray Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2016 8:09 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, Español, বাংলা, Ελληνικά, Français, русский, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny Funakoshi, avy amin'i Estelle Herbert.
Namokatra horonan-tsarimihetsika maharitra ora iray momba ny tolona isan'andro ataon'ny tanàna ambanivohitra iray hiarenana avy amin'ny Tsunami goavana dia goavana iray nandravarava ny ampahany be tamin'i Japan tamin'ny 11 marsa 2011 ilay Kanadiana mpanatontosa sarimihetsika iray antsoina hoe Estelle Herbert.
Ao amin'ny teny fampidirana tamin'ny fanadihadiana naharitra ora iray i Herbert no niteny hoe:
[…] Maro tamin'ireo akanga sisa nanamborana no nieritreritra fa tsotra sy mety kokoa ny mifindra eny an-tanandehibe miaraka amin'ny namana na fianakaviana. Izany hoe mody an-tano izany dia nidika hoe miverina amin'ny dongon-tany foana sy feno korontam-bato, tsy mahalala hoe rahoviana ihany ny governemanta, raha hanao izany, no hitodika any amin'ireo tanàna vitsy mponina kokoa. Vokatr'izany dia lasa haolo nilaozan'ny olona ireo tanàna kely an-jatony manaraka ny ilany atsinanan'ny morondranomasina iny.
Ho an'i Funakoshi, tanànan'ny mpanjono nahitana olona 350 talohan'ny voina, niova kely ny tantara. Misy mponina ao an-toerana vitsy nanapa-kevitra tsy hiala ny tanàna nilaozan'ny olona, ary hiasa ho amin'ny fanorenana azy indray.
Nanaraka ny nataon'ny mpitarika ny fiarahamonina tao aminy i Funakoshi ary manao izay tratry ny heriny amin'ny famelomana hatrany ny tanànany voafafan'ny voina ilay mpanjono antsoina hoe Koichi Nakasato eo ankilan'ilay vondron'ny mponina mazoto na dia eo aza ireo fanamby tsy maintsy atrehin'ny tsirairay miatrika ny holatra navelan'ny voina.
Hita manontolo miaraka amin'ny dikantsoratra amin'ny teny anglisy ao amin'ny Vimeo ilay lahatsary fanadihadiana. Misy ihany koa endrik'ilay fanadihadiana miaraka amin'ny dikantsoratra amin'ny teny frantsay.
Nilaza ny halalin'ny fandravana i Herbert, izay efa nandray anjara tamin'ny maha-mpampianatra azy tamin'ny Programam-pifanakalozam-Pampianarana Niaraka Tamin'i Japan raha nitsidika ny Prefakitioran'i Miyagi tamin'ny maha-mpanolotena azy taorian'ny voina.
Ary rehefa nanalavitra an'i Funakoshi izahay no lasan'eritreritra aho ka nanao anankampo hoe mety ho azo atao tantara tsara izy ity, tantara tokony horaiketina, ary tsy tokony hohadinoina. Tsy haheno loatra ireo tetikasa lavitr'ezaka amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainana taorian'ny fandalovan'ny voina voajanahary any amin'ny famoaham-baovao be mpanaraka ianao. Ahoana ny fomba niatrehan'ireo olona ireo izany ? Naharitra hafiriana vao tsapan-dry zareo ho toa mba niverina amin'ny laoniny ny fiainandry zareo ? Fanohanana lavitr'ezaka tahaka ny ahoana no mba azon-dry zareo ? Ho tafaorina indray ve i Funakoshi ? Ahoana ny fomba nitantanan'ireo mpanjono ny fiainany rehefa namoy zavatra maro dia maro tokoa ?
Nilaza i Herbert fa efa nandeha nankany amin'ny tanànakelin'i Funakoshi nandritra ny taona “handraketany izay nitranga, hanolotra amin'ny mpijery ny fijery manokana, akaiky dia akaiky, any am-po tsy miloaka loatra any, ity vondrom-piarahamonina Japoney kely miezaka ny hanorina indray ny fiainan-dry zareo ity na dia mampivarahontsana aza ny faharavana manodidina azy ireo.”